Healthy Archives - MM Daily Life
တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေး
May 3, 2022 by MM Daily Life
တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးကြပါ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရောဂါ ပျောက်ဆေး လူလေး အမေရောဂါဆီးချို သွေးတိုး တို့ကိုဗမာတောကြက်ဥ ရှားဇောင်းလက်ပတ်တို့ကလက်တွေ့ကျကျသက်သာပျောက်ကင်းသွားပါပြီ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်က ၁ ကြက်ဥနှစ်လုံး ၂ ရှားဇောင်းလက်တထွာလောက် ကြက်ဥအနှစ်ကိုမသုံးရအရည်ကြည်ကိုသာသုံးရန် ရှားဇောင်းအနှစ်ကိုကြက်ဥအကာနဲ့သံဂျီးရောင်ဖြစ်သိထိမွေပါ အင်္ဂလိပ်ဆေးသောက်ထားလျှင်၃နာရီခြားသောက်ပါ ၁ပတ်ကို၂ခါသောက်ရင်သိသာပါမယ် လက်ဆင့်ကမ်းနိူင်ပါစေ Credit zawgyi တကမာၻလုံးသိေအာင္ျဖန႔္ေဝေပးၾကပါ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆး လူေလး အေမေရာဂါဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး တို႔ကိုဗမာေတာၾကက္ဥ ရွားေဇာင္းလက္ပတ္တို႔ကလက္ေတြ႕က်က်သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါၿပီ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္က ၁ ၾကက္ဥႏွစ္လုံး ၂ ရွားေဇာင္းလက္တထြာေလာက္ ၾကက္ဥအႏွစ္ကိုမသုံးရအရည္ၾကည္ကိုသာသုံးရန္ ရွားေဇာင္းအႏွစ္ကိုၾကက္ဥအကာနဲ႔သံဂ်ီးေရာင္ျဖစ္သိထိေမြပါ အဂၤလိပ္ေဆးေသာက္ထားလွ်င္၃နာရီျခားေသာက္ပါ ၁ပတ္ကို၂ခါေသာက္ရင္သိသာပါမယ္ လက္ဆင့္ကမ္းႏိူင္ပါေစ တကမာၻလုံးသိေအာင္ျဖန႔္ေဝေပးၾကပါ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆး လူေလး အေမေရာဂါဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး တို႔ကိုဗမာေတာၾကက္ဥ ရွားေဇာင္းလက္ပတ္တို႔ကလက္ေတြ႕က်က်သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါၿပီ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္က ၁ ၾကက္ဥႏွစ္လုံး ၂ ရွားေဇာင္းလက္တထြာေလာက္ ၾကက္ဥအႏွစ္ကိုမသုံးရအရည္ၾကည္ကိုသာသုံးရန္ ရွားေဇာင္းအႏွစ္ကိုၾကက္ဥအကာနဲ႔သံဂ်ီးေရာင္ျဖစ္သိထိေမြပါ အဂၤလိပ္ေဆးေသာက္ထားလွ်င္၃နာရီျခားေသာက္ပါ … Read more
ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်လျှင် ၅ယောက်မှာ၄ယောက် ပျောက်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့နည်း
April 4, 2022 by MM Daily Life
ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်သည်ဟု ဆရာဝန် မှတ်ချက်ပြုလျှင် ငွေ မကုန်၊ လွယ်ကူစွာ ကုသနည်း ကြက် သွန် နီ ကြီး ကြီး တစ် လုံး အား ခေါင်း နည်း နည်း ဖြတ်။ အခွန် ပါး ခွါ။ ဓါး ဖြင့်မပြုတ်ထွက်သွားအောင် လေး စိတ် စိတ် ဖန် ခွက် ဖြင့် ရေ ( ၂ ) နာ ရီ ခန့် စိမ်။ ထိုစိမ် ရေ ကို တစ်ရက် သုံး ကြိမ် ( ၃ )ရက် သောက် ပါ။ တစ်ခါ စိမ် ပြီးတိုင်း ကြက်သွန် … Read more
March 27, 2022 by MM Daily Life
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ “နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး” တစ်နေ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော အမတစ်ယောက်မှ … … မောင်လေးစိုင်းမင်းသန့်မင်းကတိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေတင်နေတာမို့ အမတို့မိသားစု လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးပြောပြပါ့မယ် … ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အများအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့အမ ကုသိုလ်ရတာမို့ ပြောပြပါခင်ဗျာ … အမရဲ့ အဖေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နေတာပါ အမက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်တယ် ။ အာ့နဲ့ ပင်စိမ်းပင်နဲ့ရောဂါ ( 40 ) ဖတ်မိပြီး ပင်စိမ်းပင် ကလည်း အရံသင့်ရှိတာနဲ့ လက်တွေ့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြု လိုက်တာ ! ပုံထဲကအတိုင်းပဲ အမရဲ့ အဖေရောဂါစဖြစ်တော့ အသက် ၆၇ – ၆၈အရွယ် လူကပိန်ပြီး ရင်ဘတ်ကအောင့် လူကနည်းနည်းလှုပ်လည်းမောတယ် ။ ပင်စိမ်းပင်ဆေးသုံးစွဲပြီး နှစ်လအကြာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ အရင်လို … Read more
March 25, 2022 by MM Daily Life
၀မ်းချုပ် စမြင်းခံသူများအတွက် ဝမ်းတွင်း အပူအပုပ်နဲ့ အစာအိမ်အတွက် ဆေး ၁။သင်္ဘောပင် အဖိုပင်ရဲ့အူသားနှင့် အမြစ် (၅၀)ကျပ်သား ၂။ထန်းဖို ထန်းလျှက်( ၂၅ )ကျပ်သား ၃။မန်ကျီးသီးမှည့် အနှစ်(၁၅) ကျပ်သား၊ ဆား သင့်ရုံထည့်ပါ။ ၄။ရေသန့်( ၆ )ဘူး ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ( ၃) ခွက် (၁) ခွက်တင်ကျန်အောင် ကျိုချက်ပါ။ အအေးခံပြီး မနက်အိပ်ယာထ တစ်ကြိမ်၊ ညအိပ်ယာဝင် တစ်ကြိမ် ရေနွေးပန်ကန်လုံးနဲ့ တစ်လုံးသောက်ပါ။ ဆေးအဖတ်ကို သင့်တင့်ရုံ စားသုံးပေးပါ။ ၁။ရေဖျင်းရောဂါ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ အားအင်ချိနဲ့ရောဂါ ပန်းသေပန်းညိုးရောဂါ ၂။အမျိုးသမီးရောဂါ မီးယပ် သွေးဆုံး၊မီးယပ်ပိန်ခြောက်ရောဂါ ၃။ညောင်းကိုတ် ဒေနာခံစားနေရသူများ စမြင်းခံနေသူများ ၄။ဝမ်းတွင်းရောဂါအားလုံး အပူအပုပ်အားလုံး ပျောက်ကင်းပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကျော်သူ Zawgyi … Read more
ချောင်းဆိူးတာကို လုံးဝ ရပ်သွားစေမဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ
ချောင်းဆိူးတာကို လုံးဝ ရပ်သွားစေမဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် ဖြစ်နေတာရက် ၂၀ ကျော်နေပြီ။ ဖြစ်ခါစ တပါတ်လောက်အထိ နေ့တိုင်း ဆေးခန်းသွားပြတယ်။ မသက်သာဘူး။ လေပြွန်ရောင်တာနဲ့. ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်တွဲဖြစ်တော့ နေရဆိုး ဆေးမျိုးစုံ ဝယ်သောက် ဒါလဲ မပျောက်ဘူး။ ရက် ၂၀ ကျော်လာတော့ လူကြီးတွေက စိုးရိမ်လာလို့ အထူးကုနဲ့ ပြတော့ ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ဆေးရုံသွားဖို့ စီစဉ်နေတုန်း အိမ်ကို ရွာက ဦးလေး အလည်ရောက်တာနဲ့ ကြုံရော။ ဦးလေးက နေဦး ဆေးရုံမသွားသေးနဲ့ဦး သင်္ဘောရွက် ရေနွေးစိမ်သောက်ကြည့်စမ်း ဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဝင်သလောက် သင်္ဘောရွက်ကို ရေနွေးစိမ် သောက်တာ။ ညကျ အိပ်နိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ရောဂါ သက်သာတာပဲ ဆိုပြီး … Read more
ဆီးချိုအမှန်တကယ်လက်တွေ့ သက်သာပျောက်ကင်းသောဆေးနည်း မိတ်ဆွေတို့မိသားစုဝင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ််ဆီးချိုရောဂါကြောင့် စိတ်သောကရောက်နေသူရှိလျင်ဤဆေးနည်းကို ပြောပြပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိကဲ့သို့ ဆေးဒါနပြု၍ကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်ပါ။ ဆီးချို ရောဂါ အတွက် ဆေးနည်း လိုအပ်သောဆေးမှာနှစ်မျိုးသာဖြစ်ပါသည်။သံပုရာသီး တစ်လုံးနှင့် ထိုသံပုရာသီးနှင့်အလေးချိန်တူသည့် ဂျင်းအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကို ပုံပြပါအတိုင်း ရှာထားရမည်။ံရှာထားသောသံပုရာသီးတစ်လုံး ကို အရည်ရွှမ်းလာအောင်လက်ဖြင့်ဖိလှိမ့်ပြီး နှစ်ခြမ်းခွဲ၍အရည်ညှစ်လိုက်ပါ။ ကြွေဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ရပါကအစေ့ဖယ်ပြီးအကြမ်းပုဂံလုံးထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ထို့နောက်အရည်ညစ်မည့်သံပုရားသီးအလေးချိန်တူဂျင်းကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီးအရည်ထွက်အောင် သစ်သားငရုတ်ဆုံးသန့်သန့်၌ထောင်းလိုက်ပါ။ ထောင်း၍ညက်နေသော အရည်နှင့်အဖတ်အားလုံးကိုစွတ်ကျယ်သားပိတ်စဖြင့်အရည်စစ်၍ သံပုရာရည်ထည့်ထားသောအကြမ်းပုဂံလုံးထဲ ဂျင်းရည်စစ်စစ်ကို ညှစ်ထည့်ပြီးသမအောင် ဇွန်းဖြင့် မွှေပေးရမည်။ ထိုဆေးရည်သည်ဆေးတစ်ကြိမ်သောက် တစ်ခွက်စာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သံပုရာရည် နှင့် ဂျင်းရည်ကိုတစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်ရမည်။ ဆီးချို တဖြည်းဖြည်းအကျများလာပါလိမ့်မည်။ ဤဆေးသည် ဆီးချိုကျဆေးနည်းဖြစ်လို့မိမိရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဆီးချိုတိုင်းပြီးမှဆေးကိုသောက်ပါ။ တစ်ပတ်မပျက်မကွက်သောက်ပြီးမှဆီးချိုပါဝင်နှုန်းကိုပြန်တိုင်းလျင် အံ့သြလောက်သောအဖြေကိုရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါလိမ့်မည်။ တစ်ပတ်သောက်ပြီး အရမ်းအကျများလာပါကတစ်နေ့လျင် နေ့ ည နှစ်ကြီမ် နှစ်ခွက်သာလျင်သောက်ပါ။ … Read more
တစ်ပတ် (၁) ကြိမ်/ (၃) ပတ် လုပ်ပေးပါဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်စေတဲ့ ဆေးနည်း
တစ်ပတ် (၁) ကြိမ်/ (၃) ပတ် လုပ်ပေးပါဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်စေတဲ့ ဆေးနည်း ဒူးနာတာကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်း ရှောက်သီး (၁) လုံး ၊ ကြက်သွန်နီ (၁)လုံး၊ နှီး (သို့) ကြိုး (၁)ချောင်း၊ မြေအိုး (၁)လုံး။ ဆေးနည်း ရှောက်သီးကို အလယ်မှ ခြမ်းပါ။ ခြမ်းထားသော ရှောက်သီး အတွင်းမှာ ကြက်သွန်နီ (၁)လုံး ထည့်ပါ။ ရှောက်သီး ခြမ်း ၂ ခြမ်းကို ကြက်သွန်နီ ထည့်ပြီး နှီး (သို့) ကြိုး ဖြင့် ပြန်စည်းပါ။ သေချာချည်ပါ။ ပြီးလျှင် မြေအိုးထဲ ထည့်ပြီး ရှောက်သီး ရေမြုပ် သည် အထိ … Read more
March 18, 2022 by MM Daily Life
သွေးထွက်နေတဲ့ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ပါစေ ၇ ရက် နဲ့ အမြတ်ပြတ်စေမယ့် ဆေးနည်း အလုပ်ကများရသည်ကြား လိပ်ခေါင်းကြောင့် ဦးမိုး အတော် စိတ်ညစ်နေပုံရ၏။ မကြည်မလင်နှင့် လိပ်ခေါင်းသွေးပါသည်မို့ ပုဆိုးပင် သွေးကွက် ထင်နေလေသည်။ အမှတ်မထင် ကျေးဇူးရှင် တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးဦးကြွယ် ပေးသောဆေ းနည်းကြောင့် သွေးကျလိပ်ခေါင်း (၇)ရက်ဖြင့် လိပ်ခေါင်ပြန်ဝင်အပြီးပြတ်၍ ယနေ့တိုင်သွေးကျခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းထွက်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျ မသိကြပါသော်လည်း အချို့သော အပင်တို့၏ ဆေးစွမ်းထက်မှုမှာ အံ့ဖွယ်အတိဖြစ်ရပါ၏။ လိပ်ခေါင်းအတွက် သောက် ဆေး (၁) မီးကွင်းဂမုန်း လက်တစ်ဆုပ်စာကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းစာ သတ္တုရည်ညှစ်ယူပါ။ (၂) ကြက်သွန်နီဥ (၁)ဥကို လေးစိပ်ထိုးပြီး ထမင်းစား (၁)ဇွန်းစာ သတ္တုရည်ညှစ်ပါ။ (၃) ထိုမီးကွင်းဂမုန်းနှင့် ကြက်သွန်နီတို့မှ ညှစ်ယူထားသော … Read more
ခြေ လက်တွေ ထုံကျဉ်နေသူတို့အတွက် ဆေးစွမ်း တစ်လက်ကို ပေးပါရစေ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အိမ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ဖြစ် မနက်အိပ်ရာထချိန်များမှာ လက်ချောင်းလေးတွေတင်းနေပြီး၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတောင် မပြေချင်တဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်နေကြသူများကို ထုံကျင်နာများပျောက်ကင်းစေပြီးရောဂါကင်းဝေးစေချင်လို့ ဒီဆေးနည်းလေးကို မျှဝေတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ တစ်နေကုန် ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသူများဖြစ်ကြတဲ့ ရုံးသမားများစက်ချုပ်သမားများ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် မိုးလင်းမှမိုးချုပ်တစ်နေကုန် အလုပ်ခွင်ထဲမှာအလုပ် များနေသူများအတွက် ရောဂါကင်းဝေးစေရေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါ ခြေထောက်၊ဒူးနှင့် ပေါင်များဟာ ထုံကျဉ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဆေးလိမ်း၍ မသက်သာဘဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။နွေရာသီမှာ ခံနိုင်ပေမယ့် မိုးနဲ့ဆောင်းမှာတော့ ထုံကျဉ်တဲ့ဝေဒနာများဟာ ပို၍ ဆိုးရွားလာကာ လေဖြတ်ချင်တဲ့အထိဖြစ်မှုများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ခြားနည်းတွေလည်းရှိပေမယ့် ဒီဆေးနည်းလေးကတော့ ရှာဖွေအသုံးပြုရန် ပစ္စည်းများဟာ လွယ်ကူလွန်းပြီး ပြုလုပ်ပုံကလည်း မခက်ခဲတာမို့ ကိုယ်တိုင်ရောဂါ မဖြစ်လို့ အသုံးမပြုခဲ့ရင်တောင်တစ်ခြားသူများကို … Read more
မနက်စာ မစားတာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ?…
January 17, 2022 by MM Daily Life
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဖတ်ကြည့်ပါ မဖတ်အားသေးလျှင် ရှယ်ထားပါ မနက်စာ မစားတာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ…? (၁) နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မနက်စာ မစားတဲ့ အမျိုးသားတွေက မနက်စာ စားတဲ့သူတွေထက် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ခြေ 27% ပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်စာ မစားတဲ့သူတွေက နာတာရှည် နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ သွေးတိုး၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ (၂) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များ ပါတယ်။ မနက်စာ စားကျင့်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တွေက နေ့စဉ် မနက်စာ စားတဲ့သူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက မနက်စာ မစားဘဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဆီးချိုရောဂါ … Read more